Mbadamba ụrọ kachasị mma n'ahịa - Emelitere Septemba 2021 | Androidsis
Jose Alfocea | | Mbadamba gam akporo
Họrọ mbadamba nkume dị ihe dị ka ịhọrọ ekwentị mkpanaaka ọhụrụ nke ga-anọchi ọdụ ochie anyị. Ahia juputara na ọtụtụ ụdị na ụdị, ibu na obere, nke otu agba na nke ọzọ, nwere nnukwu ike na obere, yana, na ọnụahịa dị iche iche, site na mbadamba ihe na-erughị otu narị euro na mbadamba nke mileurista chọrọ ụgwọ ọnwa, ma ọbụnadị na ndị ahụ. Ma dị ka ọ dị na smartphones, isi ihe na mkpebi anyị dabeere n'ụzọ bụ isi anyị ga-enye ya.
Dị ka anyị kwuru, anyị nwere ike inye mbadamba ọtụtụ ojiji anyị nwere ike ịgụnye na abụọ sara mbara ụdịdị dị iche iche: oriri ọdịnaya (sọfụ intaneti, gụọ, lelee vidiyo, gee egwu, wdg) na ọrụ ndị ọkachamara, ya bụ, jiri ha rụọ ọrụ dị ka a ga - asị na ha bụ kọmputa. Ọ ga-adabere na anyị ịhọrọ maka otu ngwaọrụ ma ọ bụ ọzọ, ebe anyị ga-achọ ọtụtụ njirimara na ọ bụghị nke ndị ọzọ. - Site na nkwenye na enwere ike iji ojiji mbu (ojiji ọdịnaya) na mbadamba ọ bụla, anyị ga-elekwasị anya na nhọrọ anyị nke mbadamba nkume kacha mma n'ahịa na ụzọ nke abụọ ha onye isi ulo akwukwo Anyi ka anyi bido?
1 Mbadamba 9 kacha mma taa
1.1 Akwụkwọ Logavo Yoga
1.8 Microsoft Mkpa Pro 4
2 Kedu ihe anyị kwesịrị iburu n'uche iji họrọ otu n'ime mbadamba kacha mma
Mbadamba 9 kacha mma taa
Dị ka anyị kwurula, anyị ga-elekwasị anya na nhọrọ anyị nke mbadamba nkume kacha mma n'ahịa na iji ọkachamara, ma na-eleghara ntụrụndụ na ntụrụndụ anya. Na ha niile anyị nwere ike ịlele vidiyo YouTube, lelee, nata ma zipụ ozi ịntanetị, gee ndepụta ọkpụkpọ kachasị amasị anyị na Spotify, kpọtụrụ site na Telegram na ọtụtụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, anyị agaghị enwe ike ịrụ ọrụ na ha niile, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị agaghị enwe ike ime ya n'ụzọ kachasị mma ma rụpụta ọrụ. Ya mere, mgbe ị na-eme nhọrọ a, Anyị ga-ahụ akụkụ ndị yiri ya na ndị anyị na-atụle mgbe ị na-azụ desktọpụ ma ọ bụ laptọọpụ ọhụrụ: RAM, ihe nhazi ahụ, ogo ya na ogo ya, akụkụ ya na ịdị arọ nke ngwaọrụ ahụ n'onwe ya, uru ọ bara maka ego, wdg.
N'ikpeazụ, tupu igosi gị nhọrọ anyị, anyị achọghị ịhapụ ohere iji cheta nke ahụ, dị ka ama na kọmputa na kọmputa, mbadamba kacha mma ga-abụ ihe kacha mma na-egbo mkpa gị na atụmanya gị, ọ bụghị nke anyị ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-egosi gị, ya mere were nhọrọ ndị a dịka naanị ntinye na, na mgbakwunye, anyị ga-emelite oge karịa ka ọ ga-abụ ezigbo nduzi.
Akwụkwọ Logavo Yoga
Anyị ga-amalite na otu n'ime mbadamba mbadamba nkume nke nweela nnukwu ewu ewu na ugwu na oge ndị a. Kpọmkwem anyị na-ezo aka na Akwụkwọ Logavo Yoga, mbadamba mma ma na -eri ọdịnaya na-arụ ọrụ ma ọ bụ maka ọmụmụ. Ọ bụ ngwaọrụ dị ugbu a (ewepụtara ya na Septemba nke afọ gara aga) na ọ bụ n'ezie ụdị ngwakọ n'etiti mbadamba na laptọọpụ. Ọ nwere ihuenyo 10-anụ ọhịa na keyboard mmetụ aka nke ị nwekwara ike iji dị ka elu iji aka dee ka ederede gị ma ọ bụ eserese gị wee tinye digitized ozugbo. Dị ka sistemụ arụmọrụ ọ na-abịa na Gam akporo 6.0 Marsmallow ma ị nwekwara ụdị nke Windows 10.
N'ime isi nkọwapụta ọrụ ya pụtara ìhè Intel Atom x5-Z8550 2.4 GHz processor esonyere 4 GB nke RAM LPDDR3, 64 GB nke nchekwa na Intel HD eserese eserese. Banyere ya price, i nwere ike inwe ya site na ihe 435 euro.
Companylọ ọrụ South Korea Samsung enweghị ike ịnọ na nhọrọ a nke mbadamba kacha mma na nke ọhụrụ Galaxy Tab S3 nke e gosipụtara na MWC 2017 na February. Ọ nwere 9,7-anụ ọhịa ahụ Super AMOLED ihuenyo na mkpebi 1536 x 2048 na usoro 4: 3. Snapdragon 820 processor na-edozi arụmọrụ ya na Adreno 530 GPU, 4 GB nke RAM, 32 GB nke nchekwa na njikọ LTE nhọrọ.
Ọzọkwa, na-agụnye S-Pen na ndị ọkà okwu anọ nwere ụda stereo dị elu nke AKG bịanyere aka na ya, dị mma maka ịge egwu kachasị amasị gị mgbe ị na-arụ ọrụ.
Sony bụ ihe ọzọ nke isi technology sịrị na ọ na-egosi na ya na mbadamba nke na nke a Teepu Xperia Z4,, ngwaọrụ nwere nha ihu igwe dabara adaba maka ọrụ na oriri ọdịnaya, 10,1 sentimita. Na mkpebi 2560 x 1600. N'ime ya nwere ụlọ ọrụ dị ike 1,5 GHz asatọ-isi processor tinyere 3 GB nke RAM na ebe nchekwa dị na 16 GB (nke m anaghị adụ gị ọdụ n'ihi ezughi oke). Ọ na-anọchikwa anya maka ebugharị ya ebe ọ bụ na ọ bụ naanị 6,1 mm (ọ na-erughị ọtụtụ smartphones) ma tụọ ihe na-erughị narị gram anọ. Anyị enweghị ike ileghara nnwere onwe ya dị ịtụnanya ekele maka a 6.000 mAh batrị, ma ọ bụ gị ájá na mmiri na-eguzogide, dị ka usoro ndị ọzọ nke Xperia, na asambodo IP68.
Ọzọ nke mbadamba kacha mma bụ ihe nlereanya Google pixel C, mbadamba na ihuenyo 10,2 sentimita na mkpebi nke 2560 x 1800 pikselụ, ukwuu nha maka ma ọmụmụ ma rụọ ọrụ ma ọ bụ iji nwee ọ seriesụ usoro kachasị amasị gị yana ya. akwa ụda.
Ọ bụkwa mbadamba nkume nwere arụmọrụ dị mma nke gụnyere 3 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime ime ka ụdị nke gam akporo 6 Marshmallow nke ọ na-eji wee ọkọlọtọ.
China si eduga smartphone emeputa na-enye anyị otu n'ime mbadamba nkume kacha mma: bụ Huawei MediaPad M3 Lite 10, mbadamba nwere ihe mara ezigbo mma ma jiri nlezianya mee na ihuenyo IPS 10,1 nke anụ ọhịa ahụ Full HD n'ime nke anyị na-ahụ processor asatọ isi MSM8940 na 1.4 GHz nke Qualcomm rụpụtara yana 3GB Ram, 32GB nchekwa n'ime, 6.600 mAh batrị, njikọta LTE y Android 7 Nougat serial. Na ya niile maka ihe na-erughị euro 300. Kwere na ọ bụghị mbadamba nkume kachasị ike n'ahịa, mana uru ọ bara maka ego fọrọ nke nta ka ọ ghara imeri.
Anyị anaghị achọ ịhọrọ ụdị a na-enweghị ọnụnọ Spanish, ọzọkwa ọ bụ ụlọ ọrụ BQ na-abanye n'ime atụmatụ a maka mbadamba nkume dị mma na ihe nlereanya ya BQ Aquaris M10. Anyị nọ n’ihu otu mbadamba na ihuenyo 10,1 nke anụ ọhịa ahụ Full HD, kachasị mma na ogo maka ọrụ na oriri ọdịnaya.
N'ime anyị na-ahụ quad-core Mediatek MC88110 processor esonyere 2 GB nke Ram na 16 GB nke nchekwa esịtidem, WiFi Njikọta na Mali T720 MP2 eserese kaadị.
Mana mbadamba BQ a kwesiri ka amara ya maka ochichi ya, olu ya kacha mma, na onu ahia ya nke na-erughị narị euro abụọ.
Ọ bụrụ na ihe ị masịrị gị n'ezie, ị nweghị ike ịkwụsị ịtụle nke a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. arụpụtara site a na-ewu ewu ndịna-emeputa kaadị emeputa, n'etiti onye oru nkọwa anyị pụta ìhè ya 8 anụ ọhịa ahụ IPS (1920 x 1200) ya na 2,2 GHz ARM Cortex processor tinyere 2GB Ram, 32GB ROM, NVIDIA Tegra K1 eserese kaadị, Njikọta WiFi na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Microsoft Mkpa Pro 4
Na agbanyeghị na anyị nọ na Androidsis ma ebe a anyị na-etinye uche pụrụ iche na ngwaọrụ gam akporo, anyị ekwesịghị imechi onwe anyị na nhọrọ ndị ọzọ yana ya mere ndụmọdụ abụọ a. Anyị na-amalite na Na Pro 4 site na Microsoft, mbadamba nkume nke kariri komputa mbadamba. Ọ na-ejikọta nnukwu 12,3 anụ ọhịa ahụ na Intel Core i5 processor dị ike tinyere 4 GB Ram, 128 GB nchekwa esịtidem SSD na Windows 10 Pro dị ka sistemụ arụmọrụ. E nwekwara ya na Intel Core M processor na nhọrọ 256 na 512 GB. N'ọnọdụ nile ọ na-abịa na pensụl gụnyere na ya price karịa 800 euro. Maka ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ, ọ bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime gị chọrọ "lynch" m, m ga-etinye ihe egwu dị ka otu n'ime mbadamba kacha mma iPad Pro site na Apple, ma na nsụgharị 9,7 "ya na 10,5" ya na, karịsịa, 12,9 ". Na sistemụ arụmọrụ iOS 10 Ọ nwere ihe nhazi dị ike ma dị mma maka ịlele ọdịnaya ọdịyo nke ekele ya retina ngosipụta na ha mmadụ anọ na-ekwu okwu, na kwa ịrụsi ọrụ ike. N'ezie, ịkwesịrị iji keyboard na pencil soro ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ igosipụta akụkụ okike gị kachasị mma. Ọnụ ya na-amalite na euro 729, nke ị ga-agbakwunye keyboard na pensụl ma ọ bụrụ na ịchọrọ ahụmịhe zuru ezu.
Kedu ihe anyị kwesịrị iburu n'uche iji họrọ otu n'ime mbadamba kacha mma
Dị ka anyị kwurula na mmalite, ịhọrọ otu n'ime mbadamba nkume kachasị mma abụghị ọrụ dị mfe. O doro anya na ọtụtụ n'ime anyị ga-ejedebe site price Agbanyeghị, ozugbo anyị kpebirila mmefu ego na oke anyị ga-agaru, anyị ga-edo anya kedu ihe anyị ga-enye ya. Na mkpokọta okwu:
Ọ bụrụ na anyị ga-amachi onwe anyị iji "nkịtị" were, anyị agaghị enwe mkpa ike dị ukwuu; Iji jikwaa email anyị, na-agagharị na ịntanetị, gụọ, lelee vidiyo, gee egwu ma ọ bụ kpọọ mgbe ụfọdụ, etiti etiti na ọbụlagodi mbadamba obere ga-ezu, ọ bụ ezie na, n'ụzọ doro anya, ọ ga-aka mma inwe ezigbo onyonyo na ogo dị mma .
Oburu na anyi ga eji ya gwuru egwuYabụ anyị chọrọ ike, arụmọrụ, ezigbo eserese, yabụ Nvidia Shield nwere ike bụrụ nhọrọ kacha mma, nyere ahụmịhe ya na nhazi eserese.
Y ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ dochie laptọọpụ na mbadamba na-arụ ọrụ, lebara anya na ngwa ndị dị na mpụga (pen na keyboard), gbaa mbọ hụ na ị nwere arụmọrụ na ikike iji gbanwee nke ọma n'etiti ngwa, ma andaa ntị pụrụ iche na ogo na ogo - ọtụtụ awa n'otu oge n'ihu obere Obere ihuenyo na-enwe ahụ iru ala, mana ọ ga-emetụta ahụ ike gị.
You na-eji nke ọ bụla n'ime mbadamba ihe ndị anyị na-ahọrọ kwa ụbọchị ka ị na-ahọrọ ihe nlereanya ọzọ? Gwa anyị ntụnye gị ma nọrọ na-ege ntị n'ihi na anyị ga-emelite nhọrọ anyị n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbadamba gam akporo » Mbadamba nkume kacha mma
Ezigbo ekele m masịrị m
Ana m achọ 10-inch dị n'etiti, ana m eji ya maka ịntanetị, ozi, ịgụ na ụfọdụ ngwa.
Ihe m chọrọ bụ ka ọ dị ọsọ ọsọ ma nwekwa ezigbo ndụ batrị.
Mmefu ego m karịrị 300.
Kedu ndị ị ga-akwado m?
Samsung Galaxy J7 2016 ga-emelite ya na gam akporo 7.0 Nougat
Sony Xperia XA1 Ultra dị na India